Tababar Ku Saabsanaa Doorka Warbaahinta Iyo HIV/AIDS Oo Lagu Soo Gebagebeeyey Hargaysa | Somaliland.Org
Tababar Ku Saabsanaa Doorka Warbaahinta Iyo HIV/AIDS Oo Lagu Soo Gebagebeeyey Hargaysa
February 22, 2013	Hargaysa (Somaliland.Org): Aqoon isweydaarsi socday saddex maalmood oo ku saabsanaa doorka warbaahinta iyo xannuunka HIV iyo AIDS, oo ay wadar jir u qabteen Komishinka Qaranka ee la dagaalka HIV/AIDS (SOLNAC) iyo haya’da qaramada midoobay ee UNDP,ayaa lagu soo gebagebeeyey Hotel Imperial ee Hargeysa. Aqoon isweydaarsigan oo socday 19 February ilaa 21 February isamarkaana ay ka soo qayb galeen ka qayb galayaal ka kala socday qaybaha warbaahinta Somaliland, ayaa waxa xidhitaankii ka soo qayb galay mas’uuliyiin ka socday Solnac iyo UNDP.
Agaasimaha Solnac Maxamed Daahir Khayre oo ka hadlay xidhitaankii tababarkaa, ayaa ugu horayn soo dhoweeyey ka qayb galayaasha warbaahinta kala duwan ka socday oo uu sheegay in ka qayb galayaasha ku badnaayeen hablo da’ yar, maadaama dadka la nool xannuunka HIV ay u badan yihiin dumarku.
Maxamed Daahir waxa uu sheegay in ay ku kalifeen tababarkan ka dib markii dadka xannuunka HIV la nooli ka soo cawdeen warbaahinta oo ay sheegeen in warbaahinta lafteedu qayb ka tahay takoorida iyo faquuqida dadka la nool xannuunka iyo warbaahinta oo ka gaabisay doorkeedii wacyi gelinta ee ahaa in aanay bulshadu takoorin cuqdadna ku abuurin dadka la nool xannuunka.
Agaasimuhu waxa uu sheegay in warbaahinta Somaliland dadka ka shaqeeya ay ku shaqeeyaan mutadawacnimo, maadaama aanay helin dhaqaale ku filan, hase ahaatee ay dhinaca siyaasada xooga saaraan oo waxyaabo badan oo dhinaca nolosha saameeya ay ka gaabiyeen sida; cudurkan iyo wacyigelintiisa, tallaalka hooyada iyo carruurta, nadaafada, deegaanka, waxbarashada,hab dhaqanka wanaagsan iyo dhinacyo kale arrimaha bulshada ah.
Ereyada warbaahintu u isticmaasho marka ay ka waramayso cudurka iyo dad la nool HIV, ayaa ah kuwo ka qaby qaata takoorida iyo cuqdada, waxaana loo soo jeediyey ka qayb galayaasha in ay isticmaalaan erayo la difan, waxaana intii tababarkaasi socday lagu soo bandhigay eray bixino caalami ah oo la adeegsanayo marka laga waramayo cudurkan iyo dadka la nool HIV.
Dr. Cabdiraxmaan Cabdilaahi ( Cabdiraxmaan Geele) oo ka mid ahaa xubnihii bixinaayey casharadii tababarka, ayaa isna u sheegay ka qayb gelayaasha in marka ay ku noqdaan xarumaha warbaahinta ay ka tirsan yihiin ay dabaqaan aqoonta ay qaateen kana qayb qaataan sidii warbaahintu u yarayn lahayd faquuqida dadka la nool HIV ee bulshada dhexdeeda ah.
Waxa uu soo jeediyey in aanay dadka xannuunka la nooli ama uu ku dhacay aanay ahayn dad nasiib xun ee uu xannuun cid kasta ku dhici karo, sidaa darteed ay haboon tahay in kuwa uu hayona la soo dhoweeyo, dadka kalena laga wacyi geliyo.
Mr Musinguzi Edward oo isna ka mid ahaa dadkii soo jeedinayey macluumaadka, ayaa isna soo bandhigay xirfadaha suxufiyiintu isticmaalayso marka ay waraysanayaan dadka la nool HIV iyo marka soo bandhigayaan macluumaadka xannuunkan.
Ugu danbayntii waxa la sheegay in xannuunka fidintaaskiisu socdo, hase ahaatee la aamusan yahay, dadka la nool xannuunkuna ay ka baqayaan bulshada hadii ay soo bandhigaan doorkooda. Sidoo kale waxa la sheegay in aan warbaahintu u heelanayn ka wacyi gelinta bulshada ee cudurkan, islamaarkaana aanay abuurin doodo ku saabsan xannuunka iyo xaalladiisa.
Sidoo kale warbaahinta kama dhigto HIV iyo AIDS mawduuc war ah oo ay ka hadlaan hogaamiyaasha bulshada iyo kuwa siyaasiyiintuba.
Previous PostWefti ka socday Midowga Yurub Iyo FAO Oo Booqday Mashaariic laga fuliyay BoorameNext PostW/Daakhiliga Iyo Taliyaha Booliska Oo Ka Waramay Natiijadii Hawl-galo ay ka fuliyeen Dalka	Blog